Faallooyin| Dragons Head Shop
Bogga ugu weyn → Reviews
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 405
Cabbirka wanaagsan ee gacantaada iyo sidoo kale waxay haysaa shidaal badan, mar kasta wuu shidaa, ololku way fududahay in la qabsado oo u tooso meesha aad rabto. lagu taliyay!
Waad ku mahadsan tahay, Simon.
Waxa aan helay xumbo labanlaaban maxaa yeelay waxa ay u muuqatay mid aad u fiican mana noqon karin mid faraxsan. Si fiican ayey u shaqeysaa mana aha mid aad u weyn dhammaan. Dhab ahaantii waan ku faraxsanahay iibkan oo sida had iyo jeer ma khaladi karo dukaanka Dragons Head adeegooda ugu fiican
Waad ku mahadsan tahay, 10play.
Si fudud loo isticmaali karo mareegaha, shay qiimo wanaagsan ku fadhiya, gaarsiin degdeg ah, si wacan ula yaabay tayada iyo isticmaalka. Mahadsanid!
Qiiqa Arcfox 230W Kit
Maalgelin fantastik ah
Waxaan iibsaday vape-kan 2 toddobaad ka hor. Waxaan isku dayay in aan iska daayo sigaar cabista oo aan aad u jeclaa sigaarka. Markaa ka dib markii lagu taliyey jiido ayaa saaxiibkay waxaan iibsaday Acrifox.
Waxay dareemeysaa runtii adag waxayna u egtahay mid aad u fiican:) guddigu way fududahay in la arko oo la hagaajiyo taas oo wanaagsan marka aad rabto wax aad u weyn waqti ka waqti :)
Waxaan lahaa boos celin ah inaanan ku xambaari doonin taas oo siisay xaqiiqo aan sal lahayn markii aan meel walba ila qaato. Waxa kaliya ee aan u malaynayo in dib-u-dhac suurtagal ahi uu noqon karo waa miisaanka. Si macquul ah ayay u culus tahay taas oo aan jeclahay sida aan ogahay in aan jeebka ku haysto iwm laakiin dadka qaarkiis taasi waxay noqon kartaa arrin.
Si kastaba ha ahaatee dhammaan waa la sheegay oo la sameeyay, waxaan ku talin lahaa vape-kan iyo masduulaayada madaxa 100%
Waxay iga caawisay inaan u beddelo Vape waqti buuxa ah sigaar-cabistayduna waxay ku dhowdahay inaysan jirin natiijada
Waad ku mahadsan tahay, Brendan. Waan ku faraxsanahay inay kaa caawinayso joojinta.
Chris N. (Streatham, GB)
Shay aad u fiican. Aad u raagaya, is haysta oo fududahay in la isticmaalo.
Aad ugu faraxsan iibsashada
Waad ku mahadsan tahay, Kris.
Aad bay ugu fiican tahay qiimaha, waxay ku shaqaysaa riyo!
Si dhakhso leh oo fudud si loo dalbado iyo jawaab deg deg ah
Matayos A. (Akhriska, GB)
Fikradaha alaabta: Aspire Vape wuu is dejiyaa
Kit adag oo adag
U fiican isticmaalka guriga maadaama ay tahay tuubo weyn. Waxay leedahay xitaa jiido oo ka hortagaysa gubashada saliidda halka isla mar ahaantaana ay ka dhalaneyso daruuro badan oo qiiqa saliidda ah. Waxaan aad ugula talinayaa qaybtaan xirmada inay u isticmaasho sidii tuubo qalalan oo guriga ah.
Waad ku mahadsan tahay, Matayos.
Horumar: Websaydhku waxay u baahan yihiin cusboonaysiinta midabka madow
Jeclow laakiin cabir cabbir khaldan markaa u baahan inaad si fiican u dalbato lol si fiican oo aan jeclayn dukaamaysiga
Waad ku mahadsan tahay, Jackson.
Ma ii sheegi kartaa waxa aad uga jeedo cabbirka khaldan, fadlan? Waxaa jira hal cabbir oo ah dhuumaha noocan oo kale ah oo leh hababka wax-soo-saarka waxay qiyaastii yihiin 10cm, waxay caadi ahaan u jiraan 1-2 mm tan. Sidoo kale, waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo fikraddaada websaydh mugdi ah. Haddii aad haysato daqiiqado yar oo firaaqo ah, fadlan iimayl ku soo dir enquiries@dragonsheadshop.co.uk fikradahaaga?
Fududka ugu fiican. Waana dheer yahay
Jeclaaday laydhka cas iyo buluugga ah. Ma ku mahadsan tahay ku filan!